ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်ကဘာတွေလဲ? | USAHello | USAHello
USA တွင်, အများပြည်သူကျောင်းရဲ့အသက်အရွယ်အကြားစတင်သည်4နှင့်6နှင့်သည်အထိဆက်လက် 16 သို့ 18 အသက်အနှစ်. သင်တစ်ဦးအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ Pre-ကျောင်းကိုလည်းသင်၏သားသမီးပေးပို့နိုင်ပါတယ်. အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ. အဘယ်အရာကိုနေရာချထားသည်နှင့်မည်ကဲ့သို့ကျောင်းများသင့်ကလေးကိုနေရာချ Learn.
အမေရိကန်ဥပဒေအောက်တွင်, သင်၏သားသမီးအချို့အသက်အရွယ်အကြားနှစ်ပေါင်းတစ်အချို့အရေအတွက်ကျောင်းကိုသွားရရှိရမည်. နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အရေအတွက်ကပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှကွဲပြားခြားနားသည်. သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိနှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အရေအတွက်ကထွက်ရှာတွေ့.
အစောပိုင်းပညာရေးပညာရေးနှင့်ထိတွေ့ခံရကလေးငယ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. သင့်ကလေးကိုကလေးပင်ရသောအခါ, သူတို့ကိုမှဖတ်ပါကကူညီရန်အရေးကြီးပါသည်က, သူတို့နှင့်အတူမနာသီချင်းဆိုသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာသင်ယူကူညီ. ရှိုးပွဲကလေးများနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဘာသာစကားများစကားကိုပြောတတ်သောကြောင့်သုတေသနလုပ်ငန်းရှိပါတယ် (များမှာ “Billingual”) တစ်ဦးတည်းသာဘာသာစကားမပြောတတ်တဲ့သူကလေးတွေထက်ပိုပြီးအားသာချက်ရှိ. အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးစင်တာများနှင့် daycare စင်တာများကလေးများအသက်အရွယ်လေးငါးမှတဆင့်မွေးကင်းစများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ.
မူကြိုကလေးများကူညီပေးသည် (အသက်အရွယ်မရွေးသုံးလေးယောက်,) တိုးတက်. တချို့ကကျောင်းများမှာမူကြိုကလေးများစတင်ပါလိမ့်မယ်2တစ်နှစ်ခွဲ. မူကြိုကသူတို့ကိုအသက်ငါးကြိမ်ခြောက်မှာကြောငျးအတှကျအဆင်သင့်ဖြစ်ကူညီပေးသည်. မူကြိုဘို့တ option ကိုဦးခေါင်း Start ကိုဟုခေါ်သည်. ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအနေဖြင့်မူကြို-အသက်ကလေးများဌာနမှူး Start ကိုအစီအစဉ်များကိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်. ဦးခေါင်း Start ကိုအစိုးရက run နေတဲ့တန်ဖိုးနည်းမူကြိုဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဦးခေါင်း Start ကိုအစီအစဉ်ကို သငျသညျအနီး.
ကလေးများအများအားဖြင့်သူငယ်တန်းနှင့်အတူမူလတန်းကျောင်းကကိုစတင် (K သည်) အသက်အရွယ်ငါးခုမှာတန်းငါးကြိမ်ခြောက်မှတဆင့်ဆက်လက်. သူတို့ကအသက်အရွယ်တစ်ဆယ်သို့မဟုတ်တကျိပ်တပါးသောန်းကျင်မူလတန်းကျောင်းကိုစွန့်ခွာ. ကလေးများတစ်ခုတည်းစာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးဆရာထံမှအများအပြားဘာသာရပ်များလေ့လာသင်ယူ.
အလယ်တန်းကျောင်းသားအဆင့်ရှစ်မှတဆင့်ခြောက်လသွန်သင်. သူတို့ကအသက်အရွယ်မရွေးဆယ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ် 14. အလယ်တန်းကျောင်းသားများသောအားဖြင့်စာသင်ခန်းထဲကနေစာသင်ခန်းသို့ပြောင်းရန်. သူတို့ကတဦးတည်းကျောင်းကနေ့ရက်ကာလ၌လူများစွာကွဲပြားခြားနားသောဆရာ, ဆရာမရှိစေခြင်းငှါ. သေးငယ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်, ကလေးတွေအလယ်တန်းကျောင်းသွားဖို့ကျောင်းများအကူးအပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကမူလတန်းကျောင်းကိုသွားစောင့်ရှောက်မည်.
ကျောင်းသားများ၏အသက်အရွယ်အကြားအထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ရန် 14 ပုံမှန်အားဖြင့် 17 သို့မဟုတ် 18. အဆိုပါအတန်းဘာသာရပ်များအားဖြင့်စီစဉ်ပေးထားပါသည်. ကျောင်းသားတစ်ဦးကိုတနေ့အများအပြားဆရာများရှိစေခြင်းငှါ. အချို့သောကျောင်းသားများအဆင့်မြင့်အတန်းယူနိုင်ပါသည်. အချို့သောကျောင်းသားများအလုပျအတှကျသို့မဟုတ်ကောလိပ်အဘို့ထိုသူတို့ကွိုတငျပွငျဆငျကြောင့်အတန်းယူနိုင်ပါသည်. အထက်တန်းကျောင်းကလပ်အသင်းများ, လှုပ်ရှားမှုများ, အားကစား, အလုပ်-လေ့လာမှုအစီအစဉ်များ, နှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ.
အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်အတွက် School တွင်နေရာချထား
သင့်ရဲ့ကျောင်းသားထားရှိပါလိမ့်မည်သည့်တန်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း School တွင်နေရာချထားနည်းလမ်းများ. ကျောင်းသူတို့၏တန်းအတွင်းကျောင်းသားတစ်ဦးနေရာဘယ်မှာဒါဟာအစဆိုလိုနိုင်ပါတယ်.
သူတို့စခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်အတော်များများဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းကလွဲချော်ခဲ့ကြပေမည်. သူတို့ကအတူတူပင်အသက်ပုံမှန်အမေရိကန်ကျောင်းသားထက်ကွဲပြားခြားနားသောတန်းအဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်. အချို့သောကျောင်းသားများတစ်ဦးက high-တန်းအဆင့်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သေးအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူး. သူတို့ပိုကောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသည်အထိသူများသည်ကျောင်းသားများကိုခက်ခဲအတန်းထဲတွင်ဒုက္ခရှိစေခြင်းငှါ. US မှာကျောင်းများတစ်ခါတစ်ရံမှားအဆင့်ကျောင်းသားနေရာ.
ကျောင်းသားများကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့ start မတိုင်မီသို့မဟုတ်ကျောင်းနှစ်ကအရမ်းအစအဦးမှာအချို့စမ်းသပ်မှုယူစေခြင်းငှါ. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစာဖြင့်ရေးသားစေခြင်းငှါ. သူတို့ကကျောင်းသားတစ်ဦးမှမေးခွန်းများကိုတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီစေခြင်းငှါ,. ဒါဟာတိုင်းကျောင်းခရိုင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်.
သင်ထင်နေလျှင်သင့်ကလေးကိုမှားတန်းထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါသည်, သင်ဆရာစကားပြောနိုင်ပါတယ်, ကြောငျးအုပျကွီး, သင့်ကလေးကိုစမျးသပျနဲ့နေရာချတဲ့သူသို့မဟုတ်ကျောင်းန်ထမ်း.
ဘယ်လိုကောင်းကောင်းကျောင်းသား English သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုရမှတ်များနားလည်နိုင်
မိဘ / အုပ်ထိန်းသူအကြံပြုချက်များ
အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများအတူတူပင်တန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်မှာဆုံးမသွန်သင်ကြသည်အတန်းရှိ. တချို့ကခက်ဖြစ်ကြပြီးအချို့ပိုမိုလွယ်ကူများမှာ. အဆိုပါသင်တန်းများကိုများ၏အမည်များတစ်ခါတစ်ရံအခက်အခဲများ၏အဆင့်ကိုဖော်ပြရန်. စကားသည်ကျောင်းခရိုင်ပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲစေ.
မြင့်မားသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် level မှာအတန်းများအတွက်အမည်များ:
ခလရ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Baccalaureate)